Ahoana ny fomba hanoratanao fanamarihana bilaogy ho an'ny backlinks?
Amin'ny ankapobeny, rehefa mahakasika ny dingan'ny Search Engine Optimization (SEO) amin'ny ambaratonga, dia maro loatra ny olona misalasala na mety ho tezitra amin'ny famoronana rindrambaiko miverin-dahatsary ho an'ny tranonkalany na ny bilaoginy. Fa inona ilay olana? Ny zavatra dia ny fananganana rindran-damina ary ny fidirana azy ireo - dia zavatra roa samihafa. Ny famoronana rindran-damina dia midika famoronana na hividy azy ireo ho an'ny tanjona SEO. Farany - ilainao izy ireo mba hahitana ny tenanao amin'ireo valim-pifidianana 10 voalohany ao amin'ny Google - search for lost super. Etsy ankilany kosa, ny vola raisina amin'ny valiny dia midika fa mendrika azy ireo ianao. Ny fametrahana fotoana sy ezaka amin'ny fanoratana fanamarihana bilaogy ho an'ny backlinks dia ny dikan'ny hoe mendrika hahazo izany olona mendrika izany. Izany no antony tokony hahafantaranao ny fomba hanamboarana ny fanamarihana bilaogy mety ho an'ny backlinks izay tena miasa tokoa amin'ny fanatsarana ny ezaka SEO anao amin'ny sehatra. Noho izany, inona no mahatonga ny bilaogy "idealy" fanamarihana izay mety hahatonga anao hahazo "backlinks maro" ho an'ny PageRank avo indrindra araka izay azo atao? Andao hijery izany!
Fa alohan'ny hanombohantsika, avelao hiatrika izany - ny vola raisina amin'ny rindran-kira dia midika fa tokony ho mpampiasa. Raha jerena ny SEO, raha mahasambatra ny mpampiasa ianao, dia azonao atao ihany koa ny mikaroka motera Google. Midika izany fa tsy ilaina ny mandany fotoana betsaka hijerena ny voka-dratsy na ny tricks mba hampihomehy na hanodina amin'ny algorithm fampiasa lehibe. Maniry aho fa afaka maka ny fotoanako, fa aleo maka azy ho mendrika azy - raha te hanangana orinasa iray tena izy izay mitondra voka-karama marina ianao, dia tsy maintsy mifantoka amin'ny ezaka amin'ny fampifaliana ny mpampiasa. Raha ny marina, ny fampifandraisana azy ireo amin'ny fototra tsy miovaova dia afaka mamadika ny tsirairay amin'izy ireo ho toy ny mpanampy madinidinika amin'ny fampiroboroboana - ireo mpampiasa mirotsaka dia hahazo ny rindran-kira bebe kokoa, hizara ny votoatiny amin'ny Internet, ary mety ho tafaverina sy ho lasa ny mpividy anao ankehitriny.
Miverena amin'ny teboka - inona no fomba tsara hananana fanamarihana tsara ho an'ny blôgy ho an'ny backlinks - avelao aho hampiseho aminao ny dingana amin'ny fehezan-dalàna. Ireto ny zavatra tokony hataonao:
Ho lasa mpampiasa-centric
Ataovy ny sehatra SEO anao manerana ny mpampiasa fotsiny - voalohany sy ambony. Ny zavatra tokony hohadinoinao dia ny hoe i Google dia manaiky ny rindranasa isan-karazany ho toy ny "fifidianana. "Amin'izany fomba izany, ny zavatra rehetra ilainao eto dia ny mahazo safidy bebe kokoa" kalitao "bebe kokoa mba hahatonga ny bilaogy manokana rehetra ho an'ny backlinks ho tena ilaina.
Mifantoha amin'ny kalitao, fa tsy ny isa
Tsy ilaina ny milaza fa tokony hatao amin'ny fomba ara-boajanahary ny zava-drehetra, fa tsy hipoaka fotsiny raha handefa lahatsoratra betsaka araka izay azo atao. Raha tsy izany, ny adiresy manontolo dia azo adika amin'ny Google ho toy ny spam na karazana manipulation. Amin'izany, tadidio fa tsy azo avela eto ny plagiaristika, satria na dia ny fanehoan-kevitry ny blaogy tokana ho an'ny backlinks hafa any anaty aterineto aza dia mety hanisy ratsy anao.
Mijanòna foana ny votoatinao
Araka ny efa nolazaiko, miteraka vola be dia be tsy ho azonao mihitsy na aiza na aiza. Midika izany fa ny hany fomba ahafahan'ny tranokala na ny bilaogy hitombo dia ny hitarika ny fitarihana ary hijanona amin'ny fifaninanana. Raha raisina ny fanamarihanao amin'ny bilaogy "idealy" ho an'ny backlinks, manoro hevitra anao aho mba hahazoana antoka fa tsy manana valiny tsy misy dikany na tsy mety ianao. Amin'izany, aza misalasala ny hikaroka fikarohana feno momba ny angon-drakitra isaky ny misy fanehoan-kevitra ianao ka tsy hanana ny maha-izy azy na tsy ampy ny halaliny. Ankoatra izany, mila mamorona ianao ary vonona ny hanao ny zavatra tsy misy dikany amin'ny hafa (anisan'izany ireo mpifaninana anao sy ny mpifaninana niche).
Aza adino ny mandinika fomba hafa ho an'ny fanadihadiana ao amin'ny votoaty afa-tsy amin'ny fanehoan-kevitra amin'ny blaogy. Midika izany fa misy safidy maro hafa ahafahana mahazo rohy, toy ny fanoratana lahatsoratra vahiny sy lahatsoratra indraindray, na koa ao anatin'ny fandaharam-potoanao.